Umyeni nonkosikazi bahlenge abantu lapho beyohlangana nomngane womngane - Indlela yokuphila 2022
Umyeni nonkosikazi bahlenge abantu lapho beyohlangana nomngane womngane
UCrystal noRoger Travis sebengamaqhawe angempela!
Ngobusuku bangaphambi kukaKhisimusi, uCrystal nendodakazi yakhe kanye noRoger bahamba bayohlangana. Cishe ngesikhathi esifanayo, umkhaya wasindisa ukuphila kwabantu abaningana.
Lapho uCrystal nendodakazi yakhe bedlula kwenye yezindlu ezikwenye ye-Orkugs yaseCleveland, babona umlilo. Umama nendodakazi abazange bamele eceleni basiza umkhaya onomntwana omncane ukuba uphume endlini eyayisha. Isimo saba muncu ukuqhuma kwe-propane kanye nomlilo.
Ngezwa kuzamazama umhlaba. Kwakushunqa yonke indawo, kwakunzima nokuphefumula. Konke kwenzeka ngokushesha okukhulu nangesiphithiphithi. Ngiyajabula ukuthi (imindeni evela endlini eshayo - ed.) Ikwazile ukuphuma, - kusho uCrystal.
Konke kuhamba kahle ngomndeni, ocishe walimala emlilweni, kanye nengane eyasindiswa nguRoger.
Ebangeni elingamakhilomitha angu-30 ukusuka eCrystal, uRoger wabona indlela ababedlula ngendlela ababezama ngayo ukunikeza usizo lokuqala enganeni eyayilimele engozini. Ngenxa yamakhono ezokwelapha, le ndoda yakwazi ukuletha ingane engqondweni.
URoger uqinisekile ukuthi babesendaweni efanele ngesikhathi esifanele, abashadile banesiqiniseko sokuthi lesi simo sasingekho ngaphandle kokuqondisa kwaphezulu.
I-TOP 5 inkohliso lapho sekuyisikhathi sokuhlukana nayo lapho uneminyaka engama-30
Lapho iwashi lishintshwa libe yisikhathi sasebusika nokuthi yini okufanele yenziwe ngalolu suku
Ukushintshela nini iwashi esikhathini sasebusika, lapho iwashi lishintshwa khona nokuthi ungasinda kanjani kulesi sikhathi ngaphandle kokulimaza impilo, sisho kokubalulekile kwethu